Nagarik News - समलैंगिक यौनसम्बन्ध भनेकाे के हाे ?
समलैंगिक यौनसम्बन्ध भनेको के हो ? यो कुनै रोग हो ? यसका असर के–के हुन्छन् ? यसबाट बाच्ने उपाय के हो ?